Oke osimiri na oke osimiri. Ihe ha bụ na ndị isi iche | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie karia otu mgbe ị na-ekwu okwu ma ọ bụ hụ banyere oké osimiri na oké osimiri ị gbagwojuru anya mgbe ị na-akpọ ihe oke osimiri na oke osimiri ọzọ. Olee otú ha si dị iche n’ezie? Iji mee ka ọdịiche dị iche iche dị na mbara ala dị iche iche na gburugburu ebe obibi dị iche iche, anyị na-eji echiche nke oke osimiri na oke osimiri. Ha abụọ bụ nnukwu mmiri nnu bụ ebe obibi maka ahịhịa, anụmanụ na akụkụ ndị ọzọ nwere mmasị na akụ na ụba nke mba, dịka nkwụnye ego anyị nwere na Ihe eji eme ihe.
Chọrọ ịmata ihe bụ isi sekpụ ntị n'etiti oke osimiri na oke osimiri? N’isiokwu a anyị ga-agwa gị nke ọma.
2 Nkọwa nke oké osimiri
3 Isi ihe dị iche n’etiti oké osimiri na oké osimiri
Ihe mbu anyi gha amata iji mata ndiiche di n’etiti oke osimiri na oke osimiri bu ima ihe obula di iche. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike gụchaa ịgụ isiokwu a na enweghị obi abụọ ọ bụla banyere ya. Oke osimiri nnukwu mbara nke mmiri nnu nwere akụkụ nke hydrosphere nke ụwa. Ha bụ ndị na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ ụwa niile. Enwere oke osimiri 5 n’uwa dum kewara mmiri na uwa dum. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Oke Osimiri Atlantik. Ọ bụ nke ahụ na-ekewa kọntinenti America, Europe na Africa. Ọ bụ nke kachasị mkpa ebe ọ bụ na, na azụmaahịa, ọ bụ nnukwu isi nke mbupụ na mbubata. Na mgbakwunye, o nwere eriri ebu ebu nke na-ekesa okpomọkụ na oyi nke oke mmiri site na eriri abụọ ruo n'akụkụ ugwu na ụzọ ziri ezi.
Oke osimiri Pasifik. Ọ bụ nke nwere mgbatị kachasị ukwuu n’oké osimiri niile. Mpaghara ya dị ihe dịka square kilomita 180. Ọ dị n'etiti kọntinenti nke Asia, America na Oceania.
Oke Osimiri Indian. Ọ dị n’etiti Africa, Asia na Oceania ma pere mpe. O nwere mpaghara nke square kilomita 74.
Oke Osimiri Antartic. Naanị ihe dị nde iri na anọ na abụọ ma kpuchie ugwu North.
Oke Osimiri Antartic. Ọ nwere ihe dị ka nde 22 nde km2 na ọ bụ nke gbatịpụrụ site na ndịda osisi.
Nkọwa nke oké osimiri
Ugbu a anyị amatala ihe oke osimiri bụ na ndị nke nọ n’ụwa. N'ihe banyere oké osimiri ọ bụ ihe ọzọ kpamkpam. Oké osimiri bụ nnukwu mmiri sara mbara nke nwere nnu nnu nke nwere ike ọ gaghị enwe njikọ na oke osimiri. Ha na-abụkarị. Ha dị obere karịa karịa oke osimiri ma dịkwa omimi. Ha anaghị enwekarị oghere ndị sitere n'okike ma na-eru ụwa nso. Ebili mmiri na-adị n’oké osimiri, ọ bụghị n’oké osimiri.
Anyị nwere ike ime ndepụta na oke osimiri dị gburugburu ụwa n'agbanyeghị, n'adịghị ka osimiri, enwere ọtụtụ ndị ọzọ gburugburu ụwa na-abụghị ndepụta a. N'ebe a, anyị na-etinye ndị kachasị mkpa:
Oke Osimiri Mediterenian. Ọ bụ ndọtị kasị ukwuu nke ime kọntinent nke ụwa dum. Ọ dị n’etiti Africa, Eshia na Europe.
Oke Osimiri Baltic. Ọ bụ oké osimiri dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Europe. Mpaghara ya bụ 420 puku kilomita anọ.
Oke Osimiri Caribbean. N’ezie, ị nụla mmiri a ọtụtụ puku ugboro dị ka ebe ezumike ezumike. Ọ dị n'etiti Central America na South America na mgbatị nke kilomita 2,7.
Oke Osimiri Caspian. Ọ bụ oke osimiri nke dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Europe ma nwee mpaghara nke 371 puku kilomita kilomita.
Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ. Ọzọ osimiri nke ị ga-anụworị banyere ya. Ọ dị na Middle East.
Oke Osimiri Ojii. Amaara maka agba nke mmiri ya, ọ dị n'etiti Europe, Anatolia na Caucasus.
Oke Osimiri Uhie. Nakwa ama maka agba ya. Ọ dị n’etiti Africa na Eshia.
Isi ihe dị iche n’etiti oké osimiri na oké osimiri
Ugbu a anyị matara nkọwa nke oke osimiri na oke osimiri si na gburugburu ụwa, ka anyị hụ ihe ndịiche dị. Isi ihe dị iche n’etiti oké osimiri na oke osimiri bụ oke. Oke osimiri nile pere mpe karịa oke osimiri. Ha na-emechikarị ma dị n'etiti ala na oké osimiri. Oke osimiri bu miri mepere emepe ma di omimi nke-uku.
N’adịghị ka oké osimiri, oke osimiri nwere ọtụtụ Oke Osimiri nke na-emetụta mgbasa mmiri na ihu igwe. Oke osimiri a nwere ike ifufe, nke na-adịkarịghị oke na oke osimiri. Enwere ụfọdụ osimiri nke na-enweghị mgbatị buru ibu buru ibu, ya mere a na-ewere ha dị ka nnukwu ọdọ mmiri nnu. Iji maa atụ, eOké Osimiri Caspian, Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ na Aral Sea na-ahụta dị ka nnukwu nnu mmiri ọdọ mmiri n'ihi na ha adịghị ukwuu.
Akụkụ ọzọ bụ ọnọdụ okpomọkụ. Ebe ọ bụ na oké osimiri na-erukarị omimi, ọ na-erudakarịkwa ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ dị ala. Oké osimiri ndị dịkarịrị ụwa nso na-enweta ụzarị ọkụ anyanwụ ma na-ekpo ọkụ karịa oké osimiri. Nke a dịgasị iche n'oké osimiri dị iche iche, n'ihi ya, ọ naghị edozi. Dị ka ihe atụ, mmiri Osimiri Mediterenian na-ekpo ọkụ karịa nke Osimiri Nwụrụ Anwụ.
Ka oke osimiri na-ebelata ma na-adalata na oke n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, oke osimiri na oke osimiri abawanyela na oke n'ihi agbaze nke pola ice caps.
A bịa na ụdị mmiri dị iche iche, oke osimiri nwere oke mmiri ozuzo karịa oke osimiri. Nke a bụ n'ihi na ha na-enweta ụzo dị ukwuu nke radieshon nke anyanwụ ma nwee obere omimi. Ya mere, ha bu ebe enwere otutu ulo. N'ime oke osimiri anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ụdị, mana ha bụ ụdị nwere ike ime mgbanwe maka gburugburu na omimi dị iche iche. N'ihi ya, ọtụtụ ụdị mmiri miri emi enweghị ike ịkwaga mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche n’oké osimiri, e nwekwara ọnụọgụ ọnwụ ka elu, ebe ọ bụ na e nwere mmetọ gburugburu ebe obibi. Oké osimiri, buru ibu ma di anya site n’osimiri, ha na-anagide nsogbu nke gburugburu ebe obibi nke ụmụ mmadụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị doro anya banyere ọdịiche dị n'etiti oke osimiri na oke osimiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke osimiri na oke osimiri